Pompeo: Iiraan waa saldhigga cusub ee kooxda Al-Qaacida | Xaysimo
Home War Pompeo: Iiraan waa saldhigga cusub ee kooxda Al-Qaacida
Pompeo: Iiraan waa saldhigga cusub ee kooxda Al-Qaacida
Mareykanka ayaa sidoo kale abaalmarin gaareysa $7m (£5.1m) siin doona qofkii keena warbixin la xiriirta halka uu ku sugan yahay Maghrebi. Abaalmarinta waxaa haatanba la siiyay labo xubnood oo al-Qaacida ka tirsan oo la sheegay inay joogaan Iiraan – Saif al-Adel iyo Yasin al-Suri.
Tiro kooxda al-Qaacida ka tirsan iyo xubno qoyska Osama Bin Laden ka tirsan ayaa u qaxay Iiraan kaddib markii uu Mareykanku qabsaday dalka deriska ah ee Afghanistan sanadkii 2001. Saraakiisha Iiraan ayaa sheegay inay xadka si sharci darro ah kaga soo gudbeen isla markaana la xiray loona musaafuriyay dalalkooda.
Kaddib markii uu sanadkii hore soo baxay warkii geerida Masri, wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa ku adkeysatay in wax “argagixisada” al-Qaacida ka tirsan aysan joogin gurigeeda.
Si kastaba, dadka arrimahan falanqeeya ayaa su’aal geliyay waqtiga uu hadalka Mr Pompeo ku soo aaday, iyagoo sheegay inuu u muuqday inuu isku dayayo in madaxweynaha la doortay Joe Biden uu ku adkeeyo inuu dib ula macaamilo Iiraan uuna Mareykanka dib ugu biiro heshiiskii nukliyeerka Iiraan ee 2015.